Manchester City oo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Premier League & Guulaheeda xiriirka ah kaddib markii ay Arsenal ku soo garaaceen Emirates – Gool FM
(London) 21 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul ay u dagaallantay ka soo qaadatay Arsenal oo ay ku booqatay garoonkeeda Emirates ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Premier League.
Manchester City oo marti ahayd ayaa goolka la horreysay waxaana 76 ilbiriqsi markii kulanka la baastayba ugu shubay Gunners, Raheem Sterling.
Raheem Sterling ayaa madax ku dhammaystiray karoos qurux badan oo ka yimid Riyad Mahrez wax ka yar labo daqiiqo bilowgii ciyaarta.
Raheem Sterling waxa uu sidaas ku noqday ciyaaryahankii saddexaad ee saddex kulan oo xiriir ah bannaanka gool uga soo dhaliya Arsenal horyaalka Premier League kaddib Nicolas Anelka 2009 iyo Ian Harte 2003.
Inkastoo fursado badan la isku helay labada dhinac, welibana dhammaadkii qeybtii hore ay hurdada ka soo toostay Arsenal, haddana kulanka ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay Manchester City.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay fursado dhowr ah ayay labada dhinac sameeyeen laakiin natiijada ciyaarta ayaan waxba iska bedelin kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 lagu garaacay Gunners.
Manchester City ayaa sidaas ku gaartay guusheedii 18-aad oo xiriir ah tartammada oo dhan, 13 guulo xiriir ah oo horyaalka ah, waxaana ay sii dheereysteen hoggaanka horyaalka Premier League, iyagoo 10 dhibcood ka sarreeya kooxda kaalinta labaad ee Leicester City.
Shaxda rasmiga ah kulanka Manchester United iyo Newcastle United ee Premier League oo la shaaciyey… (Pogba, Cavani & Scott oo maqan)